Homeसमाचारगत आइतबार मात्रै घर फ’र्किएका मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना
May 5, 2021 admin समाचार 1345
श्रेष्ठलाई बुधबार पुनः मेडिसिटी अस्प’तालमा भर्ना गरिएको परिवारले जनाएको छ । आठ दिन अस्प’तालमा उपचारपछि गत आइतबार मात्रै श्रेष्ठ घर फर्किनु’भएको थियो ।
श्रेष्ठको अक्सि’जन लेवल कम भएपछि चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमा राखिएको हो । उहाँको अक्सि’जन लेवल ८४ मा झरेको परिवारले जनाएको छ । श्रेष्ठको छातीमा सामान्य इन्फेक्सन समेत देखिएको चिकि’त्सकले बताएका छन ।
श्रेष्ठमा कोरोना संक’मण पनि रहेको छ । उहाँको परिवा’रका सदस्य समेत सक्रमित हुनुहुन्छ । उहाँहरू भने घरमै होम आइ’सोलेसनमा हुनुहुन्छ । वैशाख ६ गते श्रेष्ठस’हित उनका परिवारका ५ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
पछिल्लो २४ घ’न्टामा नेपालमा थप आठ हजार ६५९ जनामा कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्र’मण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा पिसीआर विधिबाट आठ हजार ६०५ र एन्टिजेन विधिबाट ५४ जनामा सङ्क्र’मण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जा&गेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
पिसी’आर विधिबाट २० हजार ७५६ र एन्टिजेन विधिबाट ६१६ गरी २१ हजार ३७२ को स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । अब देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६ हजार ३५२ पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्र’मितको सङ्ख्या तीन लाख ५९ हजार ६१० पुगेको छ ।
कोरोना सङ्क्र’मण भएका चार हजार ७६४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा र ६१ हजार ५८८ जना होम आइसो’लेसनमा रहेका छन् । आइसीयुमा ६०० र भेन्टि’लेटरमा १५६ जना उपचार गराइ’रहेका छन् । ५८ को निध’न
कोरोना भाइरसको सङ्क्र’मणबाट गत २४ घण्टामा ५८ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रा’लयले जनाएको छ । नेपालमा हाल’सम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको सङ्ख्या तीन हजार ४७५ पुगेको छ । यस अवधिमा एक हजार ९९३ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । हालसम्म कोरोना’बाट निको हुनेको स’ङ्ख्या दुई लाख ८९ हजार ७८३ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्य’कामा तीन हजार ८२५ मा सङ्क्र’मण
काठमाडौँ उपत्य’कामा तीन हजार ८२५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौंँमा दुई हजार ८४९, भक्त’पुरमा ४५८ र ललितपुरमा ५१८ जना कोरोना सङ्क्र’मित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकै दिन काठमाडौँ उपत्य’कामा १५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । इताजा खबरबाट
February 23, 2021 admin समाचार 2175
यो युवती काका काकी भन्दै घरमा आ’उँथिन उनी युवती आफ्नो श्रीमानको कान्छी श्रीमती हो भन्ने थाहा पा’उँदा महिला छाँगावाट खसे जस्तो भएकी छन् । अहिले उनै युवतीले आफ्नो श्रीमानको सन्ता’नलाई जन्म पनि दिएकी छन् ।
September 11, 2020 admin समाचार 9461
May 13, 2021 admin समाचार 891
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (194080)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186680)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (186204)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (186143)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (184302)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (184085)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182646)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181739)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175334)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151934)